Labo xildhibaan oo ka tirsan Baarlamaanka Federaalka oo ka qeyb-galay diyaar-garowga shirka caalamiga ee Isbaddalka Cimilada Adduunka – Kalfadhi
Labo xildhibaan oo ka tirsan Baarlamaanka Federaalka oo ka qeyb-galay diyaar-garowga shirka caalamiga ee Isbaddalka Cimilada Adduunka
Senator Saciid Abdi Hussein iyo Xildhibaan Saciid Mohamed Mohamuud (Hayd) oo matalaya labada Aqalka ee Baarlamaanka Federaalka Soomaaliya, ayaa magaalada Rome ee dalka Talyaaniga kaga qeyb-galay diyaar-garowga shirka caalamiga ee Isbaddalka Cimilada Adduunka ee #COP26.
Shirka oo socday muddo labo maalmood ah ayaa loogu diyaar-garoobayay shir sannadeedka Qaramada Midoobe ee Isbaddalka Cimilada Adduunka, kaas oo 31-ka bisha Octoobar ka bilaaban doona magaalada Glasgow ee dalka Scotland.
Xildhibaan Saciid Mohamed Mohamuud (Hayd) oo wareysi siiyay Kalfadhi.com ayaa sheegay in Soomaaliya ay kamid tahay waddamada dhibka uu ku hayo Isbaddalka Cimilada Adduunka “Annaga ma lihin warshado, waxaan kamid nahay dadyoowga iyo waddamada dhibka uu ku hayo Isbaddalka Cilimada.”
Xildhibaan Saciid Mohamed Mohamuud (Hayd)/ Hassan Istiila
Warshadaha badan ee dunida horumartay ayaa isbaddal ku keenay cilimada, haddii ay warshadahaasi dhimaana waxaa yaraanaya shaqada iyo dhaqaallahooda, sidaasi awgeed doodo badan ayaa ka taagan hadda adduunka, ayuu yiri Xildhibaan Saciid Mohamed Mohamuud (Hayd).
“Isbadalka cimilada ayaa saameyn ku reeba Soomaaliya, waxaana inta badan dalka ka dhaco abaaro, fatahaado iyo duufaanno dabeylo wata oo ku dhufta qaar kamid ah xeebaha dalka. Roobka ayaa yaraada, kuleeyl badan ayaa jira mararka qaar sunaami” ayuu sii raaciyay xildhibaanka.
Dhibaatooyinka cimiladu waa khatar ka jirta dhulkeena. Mudnaanta koowaad ee caafimaadka dadweynaha waa biyo nadiif ah, hawo nadiif ah oo ay carruurteennu ku neefsadaan. Waa mudnaanta dhaqaale ee mushaharka wanaagsan, shaqooyinka cagaaran ee hadda iyo mustaqbalkaba, ayuu xildhibaan Saciid Mohamed Hayd kusoo gunaanuday hadalkiisa.
Heerka Isbaddalka Cimilada Adduunka ee laga filan karo qaaradda Afrika ayaa ah mid baaxad leh oo ballaaran. Koonfurta iyo woqooyiga Afrika ayaa ah labada meelood ee caalamka oo dhan haatan la filayo in roobabkii ka di’i jiray ay aad u yaraadaan.
Madaxdii shirka ka qeyb-gashay waxaa kamid ahaa afhayeenka Aqalka Wakiilada Mareykanka Nancy Pelosi, afhayeenka baarlamaanka Ingiriiska, afhayeenka baarlamaanka Turkiga Mustafa Sentop iyo madax iyo xildhibaannada ka kala socda baarlamaannada xubnaha ka ah Midowga Baarlamaannada Aduunka (IPU).
Shirkan ayaa ah kii ugu horreeyay oo ay isugu yimaadaan xubnaha Midowga Baarlamaannada Aduunka (IPU) tan iyo markii uu dilaacay cudurka safmarka ee COVID-19.
Ra’iisul Wasaare Rooble oo warbixin ka dhagaystay Guddiga Doorashada Heer Federaal
Midowga Musharrixiinta oo Golaha Wadashatiga Qaranka ku eedeeyay in ay qaadayaan mas’uuliyadda dib-u-dhaca doorashooyinka dalka
Madaxweyne Farmaajo oo u mahadceliyay Baarlamaankii 8-aad kaddib guushii Soomaaliya ay ka gaartay dacwada badda
Guddiga doorashada Galmudug oo la kulmay haweenka musharraxiinta Golaha Shacabka
Madaxweyne Farmaajo iyo Guddoomiyaha Golaha Shacabka oo ka qayb-galay munaasabadda salaanta calanka